Anisan'ny hanafana ny sehatra amin'ny 24 febroary 2010 ho avy izao ao amin'ny C.G.M. i Nalisoa RAVALITERA. Mpampianatra, poeta (tononkalo 500 eo ho eo), mpanoratra bokim-pianarana (Fary Mamy), mpanoratra tantara sns. Anisan'ireo vatolampin'ny fanagasiana koa izy ary na dia ny "doctorat"-ny aza dia nataony tamin'ny teny malagasy ranoray hatramin'ny sedra farany teo anoloan'ny mpitsara.
Mpikambana ao amin'ny HAVATSA-UPEM sy FARIBOLANA SANDRATRA izy, eny fa na dia maningana ihany aza ny fahitana olona iray midi-droa tahaka izao.
Betsaka ny boky navoakany. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia tsy zoviana amin'ny maro intsony ny FARY MAMY - amboara 7 - niarahany namolavola tamin-dry RABEMOLALY FANOMEZANA, RAVELOMANANA Hermann ary RAMILIARISON Henri. Nampiasaina mivantana tany an-tsekoly koa ny bokiny manokana "TAPA-POROHANA". Nisy diam-peniny aza moa efa nosedrain'ny mpianatra niatrika ny fanadinana Bakalorea. Nisy koa ireo bokin-tononkalo hafa navoakany toy ny "Fitia sy fitia". Amin'ny maha mpanoratra tantara azy dia singanina eto ireo bokiny "MADE" sy "ZETRA". Ambonin'izany dia navitrika tokoa izy tamin'ny famoaham-boky niarahany tamin'ireo MPIRAY FARIBOLANA aminy toy ny TONTOLO ISAINANA, SANDRATR'ANTSA, FARARANO TONONKALO.
Nitana andraikitra lehibe teto amin'ny firenena izy talohan'ny nandehanany nisotro ronono satria voatendry ho talen'ny teny, boky, vakiteny tao amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy Fizahantany. Tsy nohamaivaniny tamin'izany ny fampijoroana ny rafitry ny fanagasiana. Nampahafantatra izy tamin'ny 2005 fa tsy azo hidovirana ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny tenim-pampianarana any amin'ny ambaratonga fototra amin'ny maha tenin-dreny azy. Tsy amim-pahamaizana intsony toy ny natao tamin'ny fotoana teo aloha ny fanagasiana novolavolaina fa efa ananana avokoa ireo foto-drafitrasa entina anatanterahana izany. Izany akory tsy misakana ny famporisihana ny mpianatra tsy hianatra tenim-pirenena hafa indrindra amin'izao andron'ny fanatontoloana izao.
Amin'ny 24 febroary 2010 ho avy izao no hifampitaona amin'ireo mpakafy poezia malagasy izy sy ireo mpiray FARIBOLANA aminy, dia i Om-Gui sy Ranoe izany, ao amin'ny C.G.M. amin'ny alalan'ny loha-hevitra RESA-PITIAVANA, mitondra ny lohateny hoe : HIRAN'NY MATOY.